देउवालाई लगाम नलगाउने हो भने मुलुक अर्को दुर्घटनामा – Maitri News
देउवालाई लगाम नलगाउने हो भने मुलुक अर्को दुर्घटनामा
डा. अजयक्रान्ति शाक्यबाट—काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई चौका पर्यो फेरि चौथो पटक सजिलैसँग प्रधानमन्त्री बने । उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो छ तर बहिर्गमन चुनौतीपूर्ण र अपजसपूर्ण छ । यसअघिका तीनवटा प्रधानमन्त्रीकाल कालो इतिहास बने उनका लागि । यो उनकै स्वभाव र चरित्रका कारण हो । सत्तालागि मरिहत्ते गर्ने उनी जे पनि गर्छन् ,जोसँग पनि साँठगाँठ गर्छन् । संसदीय व्यवस्थामा थुप्रै विकृति र विसंगति ल्याउने उनले जात धर्म नै नमिल्ने प्रचण्डसँग अपवित्र गठबन्धन गरी आलोपालो सत्ता चलाउने नयाँ विकृति सुरु गरे । प्रचण्डलाई १० महिना शासन गर्न दिए तर अप्रत्यक्ष शासक आफै बने । प्रचण्ड शासनकालमा देउवाकै ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबका कारण विभिन्न आयोग, निकाय,संस्थान तथा निगम चरम विवादमा परे । उनको आदेशलाई सबैले मान्न वाध्य पारे । यही वाध्यताका कारण उनको दबाबमा गरिएका थुप्रै विवादास्पद नियुक्तिहरु र निर्णयले मुलुककै छवि धमिलियो । प्रचण्डको १० महिने शासनकालले नेपालको हित गरेन,नेपालको स्वाभिमान बचेन,भारतको गुलाम बनायो ।
अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि राष्ट्रवादी अडान लिएर राष्ट्रको हितमा महत्वपूर्ण कार्य सुरु गरेको ओली सरकारलाई भारतको ईशारामा ढाली प्रचण्डसँग अपवित्र गठबन्धन गरेका देउवाले अन्तत ः प्रचण्डलाई पनि काम गर्न दिएनन् चरम विवादमा फसाइदिए । के के न गर्छु भनी फूर्ति गरेका प्रचण्ड कालो छवि बनाएर सिंहदरबाट बाहिरिए । देउवाले उनलाई सारा नियम कानुनको बेवास्ता गर्दै मनपरी ढंगले विभिन्न ठाउँमा विवादस्पद छवि भएका भ्रष्टचारी आरोपीलाई धमाधम नियुक्ति गर्न वाध्य पारे । उनका अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायतका मन्त्रीहरु निरीह बने । उनको आदेशलाई मान्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु वाध्य भए ।
देउवाले जहाँ जहाँ आफ्ना मान्छलाई नियुक्ति गर्न वाध्य पारे ती मान्छेहरु चरम विवाद र भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए । उनले किन भ्रष्टाचारमा मुछिएका र विवादस्पद मान्छहरुलाईमात्र काखी च्याप्छन् ? यो मुलुकमा राम्रा र असल मान्छे छैनन् र ? सर्वत्र यस्तै यस्तै प्रश्न उठे ।
पटक पटक प्रधानमन्त्री बनी सुरासुन्दरी,सांसद किनबेच,पजेरो,प्राडोलगायत थुपै्र विवादस्पद काण्ड गर्दै माओवादी विद्रोह जन्माएर अन्त्यमा अयोग्य प्रधानमन्त्री भनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट पदच्यूत गरिएका देउवा १३ वर्षपछि फेरि १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको हत्या गराउने,मुलुकलाई चरम विभाजन र हिंसामा पुर्याउने प्रचण्डको बुई चढेर तामझामका साथ सत्तामा पुगेका छन् ।
अयोग्य प्रधानमन्त्रीका रुपमा हटाइएका देउवाले काँग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि सर्वशक्तिमान बनी पार्टी कब्जा गरे । उनको छवि पार्टीभित्र पनि राम्रो छैन । पार्टीमा पनि आफ्ना मान्छे र क्षेत्रीयतालाईमात्र काखी च्याप्ने र विरोधीलाई पाखा लगाउने नीति लिएका छन् । उनले बनाएको पहिलो मन्त्रिमण्डलमा रामचन्द्र पौडेर र कृष्ण सिटौला समूहलाई बेवास्था गरेपछि उनीहरु सहभागी भएनन् । पार्टीभित्र भागवण्डाको झगडा सुरु भएको छ । उनकै कारण पार्टीमा यो विवाद चर्किने सम्भावना बढ्दो छ ।
अर्कोतर्पm राजनीतिक क्षेत्रमा अहिले भित्रभित्रै के चर्चा सुरु भएको भने भारतले बनाएको प्रचण्ड—देउवा गठबन्धनबाटै मुलुकको गणतान्त्रिक अधिकारलाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको छ । प्रचण्डको १० महिने शासन कालमा तराई मधेस टुक्र्याउने खेल सफल नभए पनि चीनसितको सम्बन्ध विगार्न सफलता मिलेको भारतको ठम्याइँ छ । भारत भ्रमणका बेला प्रचण्डलाई २५ बुँदे सम्झौता गराई नेपाल सरकार हैसियत भारतीय दूतावाससरहको बनाउने काम गर्यो भारतले । यो राष्ट्रघाती सम्झौताको नेपालमा चरम विरोध भयो । स्वाभिमानी नेपालीहरुले कडा विरोध गरे । राजधानीवासी सचेत नेपालीहरुलाई प्रचण्ड सरकारले गरेका राष्ट्रविरोधी काम पटक्कै मन परेन । उनीहरुले स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रचण्डको पार्टीको जमानत जफत गराई दण्डित गरे तर लाजसरम पचेका प्रचण्डले आफूले राम्रो काम गरेको दावी गर्दै विवादास्पद र नराम्रो छवि बोकेका देउवालाई सत्ता सुम्पे । यो कुरा धेरै नेपालीलाई मन परेको छैन । काँग्रेसभित्र पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डसँग जसरी साँठगाँठ गरे त्यो मन परेको छैन । देउवाका कारण काँग्रेस पनि बदनाम भयो ,धरासायी हुने भयो भनी काँग्रेसीहरुले नै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । मामोवादी पार्टीभित्र पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनएकोमो असन्तुष्टि बढ्दो छ ।
प्रचण्डलाई बलिको बोका बनाएको भारतले अब देउवालाई हात लिदै छ । हिजोसम्म भारतविरोधी भनिने देउवालाई आज भारतले आफ्नो अभिन्न मित्र भन्दै प्रचार गराउँदै छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम गराउने र संविधान असफल बनाउन भारतको चाहनालाई देउवाले पूरा गरिदिने खतरा नै नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने देउवामार्फत तराइमधेसलाई अलग गराउने पृष्ठभूमिमा अगाडि सारिएका माग पूरा गराउन संविधान संशोधन गराउन अब भारतको विशेष भूमिका रहने देखिएको छ । त्यसैका लागि अहिले सबै मधेसी दलहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरे । ओली सरकारका कारण चीनतिर ढल्केका नेपाली सत्तालाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने काम देउवामार्फत गराउन थप सहज हुने अपेक्षा गरेको भारतले मधेसवादी दलहरुमार्फत चुनाव नहुने वातावरण बनाउँदै छ । सकेसम्म दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव हुन नदिने ,केही गरी भइहाले पनि विवादस्पद बनाउने जसका कारण प्रदेश र केन्द्रको चुनाव समयमा हुन नसकोस् र संविधानको कार्यान्यनमा व्यवधान खडा होस् । त्यसैका लागि अहिले राजेन्द्र महतोहरुले दोस्रो चरणको चुनाव केही महिना पर सार्न भनिरहेका छन् ।
देउवाका गतिविधिप्रति स्वयं काँग्रेसका इमानदार नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । उनीहरु नै भन्दै छन् , देउवाले पार्टी र मुलुक दुवै समाप्त पाछ्र्रन् ।
प्रचण्ड र देउवाले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि नांगो हस्तक्षेप गरे । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काम गर्न दिएनन्, आफ्नो इशारामा नचाउन खोजे,नमानेपछि महाभियोग लगाउने घृणित काम गरे । अन्त्यमा एमालेलगायतको दवावमा महाभियोग फिर्ता लिन वाध्य भए । भरतपुरमा प्रचण्डकी छोरीले चुनाव हार्ने भएपछि मतपत्रै च्याती जसरी पनि जिताउन पुन ः मतदान गराउन निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न वाध्य परी विवादमा मुछे । सो प्रकरण अहिले सर्वोच्चमा पुगेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने विषयमा पनि लज्जास्पद काम गरे । प्रहरी प्रशासनलाई पनि चरम राजनीतिकरण गर्ने प्रचण्ड र देउवालाई अब कडा लगाम लगाउनैपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राप्रपालगायताका दलहरुले अब सानातिना विषयमा नअल्झेर देउवा सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोक्न विशेष खबरदारी गर्नैपर्छ । विपक्षीको भूमिका कमजोर भयो भने नेपाल अर्को दुर्घटनामा जानसक्छ किनभने देउवाले राम्रो काम गर्छन् भन्ने विश्वास कसैलाई पनि छैन । नेपाललाई असफल बनाउन नै सुनियोजित ढङ्गले असफल देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाइएको हो । देउवा प्रधानमन्त्री बनाएकोमा अहिले केही मधेसी दलहरु र भारतमा प्रसन्नता छाएको भने नेपालीमा सन्नाटा र चिन्तामात्र ।